हामी लाई हिमाल, पहाड, झरना, ताल, बगैंचा, मठ–मन्दिर अथवा कुनै दृश्य देख्दा मनोरम लागीरहेकै हुन्छ । यस्ता दृश्यहरुले केबल आँखालाई मात्र नभएर हाम्रो मन, मस्तिष्क तथा मनोभाव लाईनै एकाग्र बनाइरहेका हुन्छन, त्यसैले हामीलाई तिनै दृश्यहरुको साथमा समय बिताउन मन लागीरहेको हुन्छ । हामी अनेकन कारणले गर्दा त्यस्ता दृश्यहरुको ठाउँमा दिनहुँ ब्यतित गर्नत सक्दैनौ तर हामी त्यस्ता दृश्यहरुको तस्बिर हाम्रो घर तथा अफिसका भित्ताहरुमा राख्न सक्छौं । हो हामी (बेस्ट आर्ट टेक्नोलोजी) तपाइहरुको इच्छा अनुसारका तस्बिरहरु तपाईहरुकै आवश्यक साइजमा प्रिन्ट गरी तपाईको घर, अफिस, होटल तथा स्कुलहरुलाइ रमणीय एवं जीवन्त तुत्याउने छौं ।
फाईदाहरु: १.घर ,अफिस, होटल तथा स्कुलहरु सजाउन सकिने २. मनपर्ने प्रकृतिको आडमा बसेको अनुभव गर्न सकिने ३. आफ्नो भित्ताहरु तथा सिलिङ्गको साइजमा प्रिन्टगर्न सकिनेहुदाँ एकाकीे रंगबाट छुटकारा मिल्ने ४. वषौँ टिकाउ हुने, वातावरण मैत्री तथा सफा गर्न मिल्ने ५. बच्चाहरु पढ्ने, सिक्ने र रमाउने किसिमका तस्बिरहरु छान्न सकिने ६. आफुलाइ मनपर्ने तस्विरहरु हुनेहुदाँ घरमा दिनभरिको एक्लोपन भन्दा आनन्दको महशुस हुने ७. पारिवारिक तस्बिरहरु पनि आर्टको रुपमा प्रिन्ट गरि सजाउन सकिने ८. प्लास्टर मात्र गरेको साथै चाईनिज इट्टाको भित्तामा पनि टास्न सकिने सम्पर्क - वेस्ट आर्ट टेक्नोलोजी (ब्याट) बसुन्धारा काठमाडौँ
फोन : ९८४३९८८०८०, ९८०३३३७१०० , ०१४३८७२६५